बच्चाहरूको लागि पाना संगीत र पाठ मौन रात
मौन रात - नोट र पाठ
मौन रात - पाठ
पाना संगीत र पाठ मौन रात
मौन रात, पवित्र रात!
सबै चीज सुतिरहेको छ, अकेला जाग्दछ
केवल साहसी, सबैभन्दा पवित्र दम्पती।
घातक कपालमा होल्डर केटा,
स्वर्गीय शान्तिमा निद्रा,
स्वर्गीय शान्तिमा निद्रा
हे भगवानको छोरा, हे हँसिलो
तपाईंको ईश्वरीय मुखबाट प्रेम,
घृणा घडीले हामीलाई बिर्सेको छ,
ख्रीष्ट, तपाईंको जन्ममा,
ख्रीष्ट, तपाईंको जन्ममा।
गोठालाले पहिले घोषणा गरे,
स्वर्गदूत Halleluja द्वारा।
के यो टाढा र नजिकै बाट आवाज हाल्छ?
ख्रीष्ट, मुक्तिदाता यहाँ छ,
ख्रीष्ट, मुक्तिदाता यहाँ छ!
Noten वोन Weihnachtslied Stille Nackt, ग्राफिक फाइल को रूपमा पवित्र रात खुला
म मेरो लालटेन - नोट्स र पाठ संग जान्छु